उत्पादन सिलाइ बुनाइ कपडा वा कपडा, छैन गरे पारंपरिक इन्टर्लेसिङ फाइबर भनिन्छ, र विभिन्न विमानहरु मा प्रबन्ध लूपहरूको प्रयोग गठन गरिएको छ। बुना भयो कपडा नरम, खण्डका र लोच छ।
बुना भयो कुराहरू राम्रो, न्यानो सहज र व्यावहारिक राख्न भन्न अनावश्यक। तथापि, तिनीहरूले ठूलो हेर्न र कुनै पनि दराज एक आभूषण बन्न सक्छ। जर्सी कुनै पनि मौसम मा पहना हुन सक्छ, तर हिउँदमा, तिनीहरूले बलियो frosts मा बस बेबदल छन्। निस्सन्देह, तपाईंले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ , बुना भयो कपडा भण्डारमा, तर प्रायजसो, तपाईं मशीनरी गरेको एक जर्सी प्राप्त। उहाँले व्यावहारिक र प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर विशेषता हात-बुना उत्पादनहरु को विशेष आकर्षण र आकर्षण छैन।
बुना स्वेटर, टोपी, स्वेटर र Mittens पक्कै हाम्रो देश को हरेक नागरिक को दराज मा उपस्थित छन् कि जर्सी पूर्ण सूची छैन। तिनीहरूलाई रूसी जाडो बच्चाहरु र वयस्क लागि लगभग nevozmozhno.Oni आदर्श हो, र काम गर्न लगाउँथे गर्न सकिन्छ, र फैशन सामान थप्दा बाँच्न बिना, यो थिएटर जाँदै लागि लगाउन वा भ्रमण गर्न उपयुक्त हुन्छ।
महिलाहरु को लागि, साथै, यो आवश्यक कम्तिमा एक बुना पोशाक गर्न, तपाईं साँच्चै प्यान्ट, र जूता जस्तै पनि चिसो मौसममा, के, विशेष गरी यदि उच्च एडी लगाउने रुचि छ। तपाईं पसलमा एक उपयुक्त पोशाक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यो ठिक छ। तर सबै भन्दा राम्रो विकल्प बुनाई सुई कपडे हुन सक्छ।
विफलता को नडराऊ। तपाईं कम्तिमा आफ्नो जीवनकालमा एक पटक spokes पकड थिए र एकै समयमा बुनना गर्न सजिलो तरिका महारत भने, यो काम तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ। तर, टेलिभिजन हेर्दै गर्दा शान्तपूर्वक अझै पनि बस्न सक्ने छैन ती, यो विचार समझदार तुरुन्तै त्याग्न थियो। बुनाई सुई मानिसहरूलाई उपलब्ध assiduous, मायालु, श्रमसाध्य काम ड्रेस: कुनै पनि मामला मा, यो एक पटक फेरि दोहोर्याउन आवश्यक छ। यो विशेष ज्ञान र सीप आवश्यक छन्। यो बिल्कुल कौशल समयमा आउनेछ जब मामला छ।
सुरू गर्न तपाईंलाई आवश्यक योजना बुनाई पोशाक spokes। यो खरीद, तपाईं जो मुद्रित कुरा, समाचार पत्र र पत्रिका बेच्छ कुनै पनि पुस्तक पसल वा पत्रिका, मा। यो काम विवरण पढ्न चयन र विचार गर्दा सबै कि तपाईं बुझे बारेमा। पाठ तपाईं स्पष्ट छैन भने, व्याख्या र व्याख्या बिना अपरिचित सर्तहरू धेरै समावेश गर्छ, यो खारेज र पोशाक को अर्को विवरण चयन गर्नुहोस्। समस्या तपाईंलाई छ कि लाग्छ छैन र तपाईँले पर्याप्त ज्ञान छैन। वास्तविकता यो त छैन। बुनना कपडे लागि शुरुआती सुई बुनाई योजना, बुझ्ने, पनि एउटा सानो बच्चा अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। राम्रो पत्रिकाहरूमा यस्ता योजनाहरु छ गर्न बाध्य छन्। निष्कर्ष सरल छ: राम्रो योजना बुन्नु कपडाहरु spokes छ जो राम्रो पत्रिका, खोज्न।
योजना चयन गरेपछि, तपाईँले यार्न को चयन गर्न जान सक्नुहुन्छ। बुनाई ढाँचा लागि निर्देशनहरू मा सिफारिस गर्ने यार्न देखि बुनना पोशाक राम्रो खबर। काम को लागि आवश्यक हुनेछ भनेर यार्न को मात्रा सामान्यतया निर्दिष्ट छ र। बुनाई लागि यार्न खरीद बचत लायक छैन जब, र कटौती-मूल्य वा कम गुणस्तर सामान किन्न प्रयास गर्नुहोस्। पोशाक spokes बुनाई उच्च गुणवत्ता र वर्ष को लागि तपाईं प्रसन्न जारी हुनेछ जो महंगा उत्पादन, निर्माण पनि समावेश छ। किनभने खराब यार्न को राम्रो पोशाक श्रेय सकिँदैन भूल छैन।
संभोग को प्रक्रिया मा ढाँचा बनाउन निश्चित हुनुहोस् यसलाई आफ्नो उत्पादन तुलना गर्न पनि अल्छी छैन। यो सम्भव inconsistencies र आफ्नो आकार मा समाप्त उत्पादन तपाईंले बचत हुनेछ। लम्बाइमा वृद्धि, लोचदार बुना भयो कपडा र तयार पोशाक सुत्छन् गर्न सक्ने भूल छैन।
सबै नियम र सिफारिसहरू अनुपालन तपाईं सही पोशाक बाँध गर्न अनुमति दिन्छ, र व्यक्तिगत अनुभवबाट तपाईं शुरुआती लागि पोशाक बुनाई एकदम सम्भाव्य कार्य हो भनेर निश्चित गर्न सक्षम हुनेछ।
डेनिम महिला वास्कट: स्टाइलिश, सुशील, साहसी!
एक उच्च कमर संग काले जीन्स: जो र कुन लगाउन?
सबैभन्दा सुशील शीतकालीन जीन्स (पुरुष)
सामरिक प्यान्ट - कसरी साधारण सुरुवाल फरक?
बिरुवाहरु Meadows र इलाकाको सुविधाहरू
को "एन्ड्रोइड" मा रोचक आवेदन: सबैभन्दा मूल समाधान
चिनियाँ कस्मेटिक्स "Tiandi": डाक्टर को समीक्षा। कस्मेटिक्स को "Tiandi सूची: अवलोकन
BOR ग्लास। BOR Glassworks
को "IDB" के हो? वर्तमान श्रृंखला मा पछिल्लो एक whiff
टर्की मा बच्चाहरु होटल: सम्पूर्ण परिवारका साथ आराम
आफ्नै हातमा "बिरालो" तकिया। सुई एक तकिया कसरी बाँध गर्न
ओवन मा एक स्वादिष्ट चिकन कसरी खाना पकाउनु? दुई विकल्प
Nekrasov "को वर्षा अघि" कविता को एक संक्षिप्त विश्लेषण